छाला हेरचाहको लागि डीएनए परीक्षण
तपाईंको गोप्य हतियार छालाको समय भन्दा पहिले रोक्न
तपाईंको छाला अनुपयुक्त छ र यसैले तपाईंले यसलाई व्यवहार गर्नु पर्छ। यदि तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको छालाको विशेष आवश्यकताहरु लाई अनुकूलन गर्नुभएन भने क्रीम र उपचारले अर्थ बनाउँदैन। छाला हेरचाहको लागि डीएनए परीक्षणको साथ तपाई आनुवंशिक बिन्दुबाट तपाईंको छालाको लागि कुन उपचार र क्यान्सर संकेत गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी विश्लेषण गर्छौं कि तपाईंको आनुवंशिकीले तपाईंको छालाको हाइड्रेशन, लोच र एंटिओक्सिडेंट क्षमतालाई कसरी प्रभाव पार्छ। तपाईं पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाइँसँग छालाको समय भन्दा पहिले नै आनुवंशिक भविष्यवाणी हो र तपाईं यसलाई लागू गर्न समय लागु गर्न सक्नुहुन्छ।
छालाको समय भन्दा अघिल्लो उमेर आनुवंशिक र पर्यावरणीय कारकहरूद्वारा जटिल जटिल प्रक्रिया हो। नवीनतम वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखेको छ कि आनुवंशिक कारकहरू माथिको असर हुन सक्छ 60% व्यक्तिहरूको बीचमा छालाको छालामा भिन्नता, जबकि बाँकी 40% गैर आनुवंशिक कारकहरूको कारण हो।
तपाईंको छाला निजीकृत हेरचाहको योग्य छ र सुरूवात बिन्दु यो आनुवंशिक परीक्षण हो जहाँ तपाई वास्तवमा तपाइँका स्याहारहरू भित्र आफ्नो सेतो को आवश्यकताबाट के देख्न सक्नुहुन्छ।
रिपोर्टहरू उपलब्ध छन् अंग्रेजी, जर्मन, Frances, इटालियन, Polaco र español
यो छालाको हेरचाहको लागि हाम्रो डीएनए परीक्षणको भागहरू हुन्
तपाईंको छालाको हेरचाह गर्दै
यस खण्डमा हामी त्वचाको समय भन्दा पहिलेको अन्त्यमा केही महत्वपूर्ण कारकहरु जस्तै दर्मल संवेदनशीलता, प्रदूषण विरुद्ध संरक्षण, ग्ल्याकेशन, एन्टीएक्सिडेंट क्षमता आदि जस्ता विश्लेषण गर्दछौं। हामी तपाईंको आनुवंशिक भविष्यवाणी को पर्यावरणीय कारकहरु को विश्लेषण गर्नेछ जो तपाईं को उपयोग को क्रीम को प्रकार को सीधा प्रभावित गर्दछ।
यस खण्डमा हामी पनि तपाइँको पूर्ववर्ती केहि रोगहरु जस्तै मुँहासे, psoriasis, आदि पीडित देख्न सक्नुहुन्छ।
सूर्य र तपाईंको छाला
हामी तपाईंको आनुवंशिक भविष्यवाणी सौर विकिरण को प्रभावहरु लाई, तपाईंको आनुवंशिक सजिलै संग टेनिंग को लागी र sunspots गर्न हुनेछ। यस खण्डमा हामी तपाईंको भविष्यवाणी एक त्वरित तस्वीर उमेर को जान्दछन्, जसको साथ यो धेरै सल्लाहकार हुनेछ कि तपाईंको दिन क्रीम यूवी किरणों को बिरुद्ध केहि प्रकार को सुरक्षा ले जान्छ।
तपाईंको छाला खुवाउनुहोस्
पहिलो छालाको हेरचाह भित्र भित्रै आइपुगेको छ, र तपाईंको पोषण छालाको समय भन्दा पहिलेको केही प्रकारको कुञ्जी हुन सक्छ। केहि पोषक तत्वहरु तपाईंको छाला को स्वास्थ्य को लागी महत्वपूर्ण छ र केहि निश्चित उत्परिवर्तनहरु हो जो यिनी आवश्यक पोषक तत्वों को उचित अवशोषण को रोकन सक्छ। तपाईंको व्यक्तिगत आवश्यकताहरू थाह पाउँदा तपाईंलाई तपाईंको छाला राम्रो बनाउन मदत गर्नेछ।
मलाई मेरो आनुवंशिक परीक्षणले छाला हेरविचारको लागि चाहान्छ
यो परीक्षण कसरी गरिन्छ र म यो गर्न सक्छु?
यो धेरै सरल छ हामी किट संसारमा कुनै पनि ठाउँमा पठाउँछौं। धेरै सरल निर्देशनहरू पछ्याउन्जेल मुखमा भित्रको कपास स्वाभिलोमा बसाइदिनु पर्छ। हामी सबै चीजको हेरचाह गर्यौं र केही हप्तामा तपाइँले इमेल बाट तपाईंको रिपोर्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ।
के मैले आफ्नो स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा यस परीक्षणको डेटासँग कठोर परिवर्तन गर्नुपर्छ?
होइन, तपाईंको स्वास्थ्यलाई असर पार्ने कुनै पनि परिवर्तन डाक्टरले अनुगमन गर्नुपर्छ।
मैले यो रिपोर्ट पाउँदा सबै के गर्न सक्छु?
तपाईंको रिपोर्ट, जस्तो कि तपाईं उदाहरण डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ कि माथि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै संग बुझ्न सकिन्छ तर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुने सबैभन्दा राम्रो लाभ यो तपाईंको डेमोरेटोलोजिस्ट वा तपाईंको सुन्दरता केन्द्रको परामर्शमा लिइरहेको छ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जेनेटिक अध्ययनहरू लागू गर्दछौं र वैज्ञानिक समुदायले तपाईंको आनुवंशिक नक्सामा स्वीकार्छौं। तल तपाईंले प्रयोग गरिएका केही अध्ययनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
छाला हेरचाहको लागि हाम्रो जेनेटिक परीक्षण आधारित छ केहि अध्ययनहरू:
जेनेटिक बहुलकता र छाला उमेर: जनसंख्या जीनोटिपिक समूह को पहिचान व्यक्तिगतकृत उपचार को लागि क्षमता राख्छ
छाला उमेरको पाथजनजनिस अध्ययन गर्नको लागि प्लेटफर्मको रूपमा ग्लिएटेड पुन: निर्मित पुनर्निर्माण मानव छाला
सुपरक्साइड डिफुटज जीनको विनियम: रोगमा असरहरू
छाला र भिटामिन कमजोरीमा माइक्रोसल अभिव्यक्तिहरू
Coenzyme Q10 चयापचय र मानवहरुमा कोनजिम Q10 स्थिति मा आनुवंशिक भिन्नता को बीच संघ
छाला हेरविचारको लागि यो डीएनए अध्ययनले 300 अध्ययनहरू भन्दा माथि आधारित हुन्छ जस्तै माथि उल्लेख गरिएको।